Soft Shell bonding wuxuu sawirayaa dunta qoraalka ama dhogorta maqaarka ee dty leh daabacaadda dharka dhijitaalka ah-isku xidhka 、 dhogorta isku dhafan-Shaoxing Dareemo Cirbadda Dharka ah
Halkan ayaad joogtaa: Hoyga>Product>Winter>dhejis 、 dhogor isku dhafan
Soft Shell bonding wuxuu sawirayaa dunta qoraalka ama dhogorta maqaarka oo leh daabacaadda dharka dhijitaalka ah
Dhar isku dhafan waa nooc cusub oo ka samaysan hal ama dhowr lakab oo ah qalabka dharka, qalabka aan walxaha lahayn iyo waxyaalaha kale ee ku shaqeeya iyada oo la isku xidhayo. Ku habboon fadhiga, dharka iyo dharka kale ayaa ka mid ah dharka aan looga maarmin nolosha guriga dadka.
Dhar isku dhafan ayaa laga sameeyaa microfiber-ka oo lagu farsameeyo dhar gaar ah iyo dheeh iyo dhammeyn gaar ah, ka dibna waxaa lagu farsameeyaa qalabka "iskudhafan". Dharka isku dhafan: "Dharka Dahaarka" "Shell Soft Shell"
Dhar isku dhafan ayaa lagu dhejiyay "fiber cusub oo isku dhafan" tiknoolajiyad sare iyo qalab cusub, oo leh waxqabad aad u fiican (marka la barbardhigo fiilada isku dhafan ee caadiga ah), sida waxqabadka dharka ganaax nadiif ah, jilicsan, xarrago leh. Dharku waa dabayl la'aan, neefsan kara, oo leh shaqo gaar ah oo biyuhu xiraan, astaamaha ugu muhiimsan waa diirimaad, hawo wanaagsan oo hawo leh.
DTY bond cationic fabric
Dharka isku dhafan waa dharka jaakadaha caanka ah ee Yurub iyo Ameerika.
Kala soocida dharka isku dhafan
1. Dhar tolmo leh iyo midab tolmo leh oo tolmo leh
2. Isku darka dharka la tolay iyo dharka la tolay
3. Dhar tolmo leh iyo dhar isku dhafan
Dhar isku dhafan oo shaqeynaya
Dharka isku dhafan wuxuu leeyahay shaqooyin gaar ah oo ka hortagga biyuhu iyo qoyaanka, iska caabinta shucaaca, iska caabinta iska caabinta iyo u adkaysiga abrasion.
Isboortiga iyo nooca firaaqada ah waxay isticmaalaan dhar isku dhafan oo isku dhejisan, iyo saameynta dharka tolmo wanaagsan, dabacsanaanta ayaa wanaagsan
Dhar isku dhafan oo cad
Dharka iyo waxyaabaha ku dahaadhan waxa ku xidhan dhejis, si loo hagaajiyo muuqaalka dharka, kaas oo ku habboon fududaynta tiknoolajiyada wax soo saarka dharka iyo soosaarka baaxadda weyn.
100d 144f Sawir dun duneed Textured ama dhogorta maqaarka
Coral Velvet / dhogor